Ndiko mashoko ekutsvakurudza mabhuku ema Amazon vatengesi chaizvoizvo zvakakosha nokuda kwezvangu zvinyorwa zvinyorwa?
Kutaura zvazviri, ecommerce kana kudonsa-kutumira bhizinesi yemauto (saAmazon pachayo, pamwe neBay, Alibaba store, Walmart, etc. ) chaizvoizvo yakafanana neyakatanga kutsvaga injini nenzira yakasikwa. Zvinoreva kuti zvakakodzera kugadzirisa kugadzirisa chirongwa chikamu chinonyanya kukosha chekutengeserana kwekutengesa kwekutengesa uko. Nenzira iyo, zvakanyatsorongedzwa uye zvakadzama keyword kutsvakurudza ndizvo chaizvo zvinokonzera mutsetse pakati pekugadzirisa kwepurojekiti yakakosha uye bhizimisi rakakwana. Uye zvinoreva kuti kushandiswa kwepamusoro-soro izwi rekutsvakurudza zvishandiso rakagadzirirwa kuAngers vatengesi rinova chikonzero chakakosha - chinoda chete kurarama pasi pechikamu ichocho chechokwadi chemakwikwi emusika pamusoro apo - pane chero mararamiro amarudzi ose sezvaungafunga. Saka, pasi apa ndichaenda kuzokuratidzai mazita akanaka ezvinyorwa zvakanaka ma Amazon vatengesi - lampione esterno giardino.
Vose vanoshandiswa-vanovimbiswa uye vanovimbiswa nevatsigiri vepaIndaneti ndakaedza kuongororwa kwebhuku rangu pamusika wakazara pamusika - inzwa wakasununguka kuti uedze neaya anotevera:
Hazvishamisi, iyi yakare yekare yekutsvakurudza mashoko uye kushambadzira kwemashoko inoshandiswa zvine simba yekugadzirisa zvigadziriswe zvakashandiswa neshumba yevana vesangano reSeOs. Zvechokwadi, Google Keyword Planner haisi pakati pezvinhu zvakanyatsogadziriswa zvigadzirwa zveAngers vatengesi. Kunyange zvakadaro, kana zvasvika kune keyword kutsvakurudza uye kunzwisiswa chikuru chekutsvaga kutsvaga mamiriro-e-Keyword Planner tool ndiyo chaiyo inogona kukupa yakanaka kutanga kutanga kutanga, maererano nekutaridza iwe mufananidzo mukuru wevose vanogona kukunda uye vanobatsira. Zvakanaka, kana yakagadziridzwa nzira yakarurama, inofanira kuva yako inonyanya kukosha mazwi ekutsvaga organic search traffic ku Amazon yako listings, uye nokudaro kusarudza yako yakawanda maitiro emabhizimisi ekugadzira mari.
Kana zvasvika pakutsvaga mazwi makuru ekubetsera uye inofanirwa kukunda mutsara wekutsvaga kutsvakurudza kutsvaga, Seller Prime inowanikwa pakati pe zvakanakisisa zvigadzirwa zveAngers vatengesi. Zvose zviri nyore pano. Uye zvose zvaunoda ndezvokupinda chero zita rekugadzira kana kuti Amazon ASIN nhamba - uye iwe wapedza, uine runyoro rwemashoko anokosha emazano akakugadzirira iwe nguva inenge isina nguva.
Ndiyo imwe nzira yakanaka yekutsvakurudza mashoko enyu ezvinyorwa uye kuwedzera mazano kuAmazon. AMZ Insight ndiyo yakagadzirirwa yose yezvigadzirwa zveAmerica vatengesi, kuti zvive zvakanyatsojeka. Ndicho chikonzero ichi chi-chinova "toolkit" chinogona kukubatsira kwete chete nekukwikwidzana kweruzivo uye kwenguva refu-misi mikuru yevhangeri mazano, asi nekuwana mibvunzo yepamusoro yekutsvakurudza, kuongorora mavheji avo ehurukuro yekutsvaga, kuenzana nhamba yezvimwe zvinhu zvakabatana izvo zvakatove zvakanyorerwa chimwe chinhu chinokosha, kuenzanisa ikozvino kwemazwi e keyword makwikwi, CPC ads uye zvakanyanya.